बाबु-आमालाई खुशी राख्न र सपना पूरा गर्न विदेशिएको एक्लो छोराले खुट्टा गुमाएर स्वोदेश फर्कनु परेपछी …. – Purba Aawaj
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १३, २०७८ समय: २०:५७:४८
पन्जाब पुगेपछि उनी ग्रिल उद्योगमा काम गर्न थाले । मासिक करिब २२ हजार तलब बुझ्थे । त्यहाँ पुगेको दुई महिनासम्म उनले घरमा नियमित पैसा पठाए ।छोराले कमाई गरेर महिनैपिच्छे पैसा पठाउन थालेपछि बुढा बा-आमा खुसीले दं,ग थिए । उनीहरुलाई लाग्थ्यो, ‘अब हाम्रो दु:खको दिन सकियो, सखका दिन आयो’ ।
बुढेसकाल बा-आमाको सहारा बन्ने सोचेर पन्जाब पुगेका उनले दुर्घटनामा परेपछि एउटा खुट्टा गु`मा`ए । अहिले उनैलाई बैसाकीको सहारा नभई हुन्न । उनको बुबाको पनि एउटा खुट्टा नशाको रोगका कारण चल्दैन, आमा पनि दमको रो`गी । घरमा उनी, उनका बृद्ध बा-आमा मात्रै छन् ।
बा-आमाले कमा`उन नसक्ने भएपछि कक्षा ११ मा पढ्दापढ्दै चटक्क छाडेर कमाउन गएका उनी नै दुर्घटनामा परेपछि उनको सम्पूर्ण परिवार नै सहाराविहीन बनेको छ । लामिछानेको बुबाले आँखाभरि आँसु बनाउँदै दुु:ख सुनाउँछन्, ‘कान्छो (केशव) भारत जानुभन्दा अघिल्लो सालसम्म म आफै त्यही भारतमा नै मजदुरी गरेँ, त्यसैले परिवार पालेँ । छोरोले बा- अब म ठूलो भएँ, तपाईहरु कति दुख गर्नुहुन्छ ? अब म कमाउँछु तँपाई घरमा बसीबसी खानु भन्यो । अनि जान छाडेँ ।’
Last Updated on: August 29th, 2021 at 8:57 pm